कोरोनाका कारण लन्डनमा बाबु`छोरी सुधिर र पुजाको नि`धन, मला`मी जाने कोही भएनन् !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/कोरोनाका कारण लन्डनमा बाबु`छोरी सुधिर र पुजाको नि`धन, मला`मी जाने कोही भएनन् !!
बेलायतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्र`मणबाट २४ घण्टाभित्र बाबुछो`रीको ज्या`न गएको छ। हि`थ्रो विमान`स्थलको अध्यागमनमा कार्यरत अधि`कृत बुवा र फार्मे`सीमा काम गर्ने छोरीको २४ घण्टाको अन्त`रमा नि`धन भएको हो।
बुधबार ६१ वर्षीय बुवा सुधीर शर्माको ज्या`न गएको थियो भने ३३ वर्षीया छोरी पूजाको बिहीबार निध`न भएको हो। पूजाको नि`धन अस्पताल भर्ना भएको ३ दिनमै भएको थियो। दुबैको अन्त्ये`ष्टिमा कोही पनि मला`मी नभएको समाचार द सनले लेखेको छ। समा`चारका अनुसार आफ्ना श्रीमा`न्को अन्त्ये`ष्टिमा ‘आइसो`लेसन’ मा ब`स्नु` परेकाले श्री`मती मला`मी जान पाइनन्।
‘यो तुलना नै गर्न नस`किने पीडा हो’, स्रोत`लाई उल्लेख गर्दै समाचा`रमा लेखिएको छ, ‘उनकी श्रीम`ती आइसो`लेसनमा ब`स्नु परेकाले अन्तिम सं`स्कारमा सह`भागी गराउन सकिएन। यो नि`कै दर्दनाक अवस्था हो।’बुवा सु`धीरलाई विमानस्थ`ल वा कहाँ भाइरस संक्र`मण भएको भ`न्ने खुलेको छैन।
विमान`स्थलमा प्रिय अधि`कृतका रूपमा चिनिएका उनलाई जनवरी ७ मा संक्र“मण भएको थियो। अन्न`पुर्ण पोष्ट`मा खबर छ । सुधीर पश्चि`मी लन्ड`नको हन्स्लो` निवासी हुन्। उनलाई केही वर्षयता अर्को रोगले समेत सताइरहेको बताइएको छ।